Ny Apple Watch dia mametraka olana amin'ny famantaranandro Soisa | Vaovao IPhone
Rehefa nampidirina ny Apple Watch dia tsy tadidiko raha ny voalohany (septambra 2014) na fanindroany (martsa 2015), nilaza ny mpandinika sasany fa hametraka olana amin'ny famantaranandro mahazatra izy ireo, miresaka manokana ny fiambenana swiss. Betsaka tamintsika no nametraka ny tanantsika tamin'ny lohany satria toa zavatra tsy azo ampitahaina izy ireo, saingy ny fifandanjana ara-bola farany dia toa mifanaraka amin'ireo izay naminavina olana ho an'ny famantaranandro mahazatra. Ary ny indostrian'ny famantaranandro Soisa dia nahita ny varony midina 8.5% raha oharina amin'ny telovolana teo aloha.
Raha ny filazan'ny mpandinika dia teraka tany Azia io fihenam-bidy io ary hiparitaka amin'ny tsena hafa, izay tokony hampiakatra ny fanairana rehetra tsy an'ny mpamokatra famantaranandro avy any Suisse ihany, fa amin'ireo mpanamboatra famantaranandro mahazatra rehetra. Raha ny hevitro sy mijery ireo tarehimarika, ireo mpanamboatra tsy maintsy hainy ny manavao na izy ireo dia azo jerena amin'ny scenario tahaka ilay niainan'i Blackberry, izay efa nanolotra ny finday finday Android voalohany saingy mety tara loatra izany.
Nanomboka tsikaritra ny fihenan'ny volana Mey, bebe kokoa na kely aza rehefa nivarotra ny Apple Watch. Ny varotra dia nilatsaka 9,9% tamin'ny volana fahadimy 2015, nefa mbola ambony noho izany aza Jona, mahatratra hatramin'ny 10%. Ny telovolana fahatelo tamin'ny 2015 no ratsy indrindra hatramin'ny 2009. Na izany aza, nilaza ihany koa ireo mpandinika fa ny famantaranandro mahazatra dia hijaly "aretina mahafaty" any Azia amin'ity taona ity.
Ireo tatitra dia manome toky fa ny famantaranandro voadona mafy indrindra dia ny an'ny mid-range, izay nilatsaka 14,5% ary manana ny vidiny eo anelanelan'ny 200 sy 500 francs (€ 184,56 sy € 461,40). Mifanaraka amin'ireo maodely Apple Watch Sport ireo vidiny ireo. Raha fintinina, raha toa ka manana zavatra tokony homena tsiny ny Apple Watch amin'ny fihenan'ny fivarotana famantaranandro Soisa, dia ao amin'ny kininina ekonomika indrindra io. Ny mpanjifa dia hanohy mankafy ny famataranandro mahazatra toy ny fitsipika ankapobeny raha ny amin'ny modely lafo vidy. Amin'izay lafiny izay, farafaharatsiny, manjaka ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch dia mametraka olana amin'ny famantaranandro Soisa
Siri mivazivazy momba ny "hiverina amin'ny andro ho avy"
Podcast 2x07 an'ny Actualidad iPad: Klaona Netflix, Apple Music ary iPhone